multimeter ကိုဘယ်လိုရွေးရမလဲ အခမဲ့ဟာ့ဒ်ဝဲ
una အသုံးအများဆုံး tools တွေ၏ လျှပ်စစ်နှင့်အီလက်ထရောနစ်လောကရှိအထူးသဖြင့်ပညာရှင်များနှင့်ထုတ်လုပ်သူများကဖြစ်သည် အဆိုပါ multimeter သို့မဟုတ် multimeter။ များပြားသောပမာဏကိုတိုင်းတာ။ လုပ်ဆောင်နိုင်သည့်ဒြပ်စင်တစ်ခုဖြစ်သည် ဤကဲ့သို့သောဆားကစ်အမျိုးအစားများအတွက်အခြေခံစစ်ဆေးမှုများ.
ဘယ်အချိန်မှာ multimeter ကိုနှိုင်းယှဉ်ပြီးအသင့်တော်ဆုံးကိုရွေးချယ်ပါလူတိုင်းမရှင်းဘူး ထို့ကြောင့်၊ သင်၏ငွေကိုကောင်းစွာရင်းနှီးပြီးအရည်အသွေးနှင့်တိကျသောအရည်အသွေးကောင်းရှိပါကလျှို့ဝှက်ချက်များအားလုံးကိုပြသထားသည့်ဤလမ်းညွှန်ကိုဂရုပြုသင့်သည်။
1.1 multimeter အမျိုးအစားများ
2 multimeter အသုံးပြုနည်း
3 multimeter ကိုဘယ်လိုရွေးရမလဲ
3.1 အကြံပြု multimeters
Un multimeter, tester သို့မဟုတ် multimeter, AC / DC ဆားကစ်တွင်မတူညီသောလျှပ်စစ်ပမာဏကိုတိုင်းတာနိုင်သောအီလက်ထရောနစ်ပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ သင်သည် voltage များ၊ ပြင်းထန်မှု၊ စွမ်းအားများ၊ ခုခံမှု၊ အချို့တွင် transistor များကိုစစ်ဆေးခြင်း၊ open circuits (continuity) စသည့်အပိုလုပ်ဆောင်ချက်များပါဝင်သည်။ ထို့ကြောင့်၎င်းတို့ကို poly (သို့) multi ဟုလူသိများသောကြောင့်၎င်းတို့သည်အရာများကိုတိုင်းတာနိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
ဤအ multimeter အမျိုးအစားများအများအပြားရှိသည် တိုင်းတာခြင်း tools တွေကို သူတို့ကအားလုံးကိုထောက်ခံတိုင်းတာပေးနိုင်အောင်အတွင်းပိုင်း, အုပ်စုဖွဲ့။ ဆိုလိုသည်မှာ၎င်းတို့သည် voltmeter၊ အမ်မီတာစသည်တို့ပါဝင်သည်။ ထို့အပြင်၎င်းတို့သည်မှန်ကန်သောအတိုင်းအတာနှင့်ကိုက်ညီရန်အတွက်ထောက်ပံ့ထားသည့်ပမာဏအမြောက်အမြားသို့မဟုတ် submultiple များစွာကိုရွေးချယ်ခြင်းကိုထောက်ပံ့သည်။
တိုင်းတာရန်သင်၌ကြိုးများရှိသည် အချို့စုံစမ်းစစ်ဆေး circuit ၏မတူညီသောပမာဏကိုတိုင်းတာရန်မည်သည့်ဆက်သွယ်မှုကိုပြုလုပ်သည်၊
ဝါယာကြိုးအနက်ရောင် (-)COM ဆိုတာဘုံလို့ခေါ်တယ်။ ၎င်းသည်ပြင်းအားအားလုံးအတွက်အလုပ်လုပ်သည်။
ဝါယာကြိုးနီ (+): အခြားကေဘယ်ကြိုးသည်တိုင်းတာရမည့်ပမာဏ၏တန်ဖိုးနှင့်အတူ pin နှင့်ချိတ်ဆက်လိမ့်မည်။ ဥပမာအားဖြင့်ဗို့အားကိုတိုင်းတာရန်၊ V ကိုညွှန်ပြသော pin ကိုရှာရန်သို့မဟုတ်ပြင်းထန်မှု A ကိုတိုင်းတာရန်စသည်။
၎င်းကိုပြုလုပ်ပြီးသည့်အခါ selector ကိုသင့်လျော်သောအတိုင်းအတာအတိုင်းအတာဖြင့်နေရာချပြီးလျှင်ဆားကစ်ကိုထိလိုက်ခြင်းသည်တန်ဖိုးကိုပြလိမ့်မည်။ မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာတိုင်းတာခြင်း.
အဲဒီမှာ နှစ်ခုအခြေခံအမျိုးအစားများ multimeter ကိုရွေးချယ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဘာသိသင့်သလဲ
analogဖြေ - သူတို့ကအသက်ကြီးပြီးဂန္ထ ၀ င်ဆန်တယ်။ ဒါပေမဲ့သူတို့ကသူတို့ရဲ့တိကျမှုနဲ့ယုံကြည်စိတ်ချရမှုတွေကြောင့်ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တွေကပိုနှစ်သက်ကြတယ်။ ရလဒ်များကိုပြသရန်၊ ၎င်းတို့တွင်တန်ဖိုးကိုအမှတ်အသားပြုမည့်စကေးနှင့်အပ်တစ်လုံးပါသည့်မျက်နှာပြင်တစ်ခုရှိသည်။
ဒစ်ဂျစ်တယ်ရလဒ်တွေကိုပြသနိုင်ဖို့သူတို့မှာ LCD မျက်နှာပြင်ရှိလို့လေ။ ၎င်းတို့သည်များသောအားဖြင့်အထူးသဖြင့်အစပြုသူများအတွက်အထူးအနှစ်သက်ဆုံးဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့သည်ကောင်းမွန်သောတိကျမှန်ကန်မှုနှင့်လည်းတိုင်းတာသည်၊ သို့သော်ကိန်းဂဏန်းတန်ဖိုးကိုဖော်ပြခြင်းဖြင့်တိုင်းတာမှုများကိုဖတ်သည့်အခါတိကျသည်။
ဘယ်လိုအမျိုးအစားပဲဖြစ်ပါစေ၊ ခဏစောင့်ပါ, တန်ဖိုးများကိုခဏပြီးနောက်ပြီးနောက်သည်အထိမျက်နှာပြင်ပေါ်မှာတည်ငြိမ်ဆက်လက်တည်ရှိမည်မဟုတ်ကတည်းက။ ထို့ကြောင့်ပထမဆုံးပေါ်လာသောတန်ဖိုးသည်အကောင်းဆုံးမဟုတ်ပါ။
multimeter အသုံးပြုခြင်း တော်တော်ရှင်းပါတယ် အရာအားလုံးသည်သင်တိုင်းတာလိုသောပမာဏပေါ်တွင်မူတည်သည်။ Commons အများစုမှာ -
ဗို့အားသို့မဟုတ်ဗို့အား: အနီရောင်ကေဘယ်ကြိုးကို V plug နှင့် selector အားသင့်လျော်သောယူနစ် (mV, V, kV ... ) ပေါ်တွင်တင်ခြင်းအပြင်သင်စစ်ဆေးမည့်အချက်ပြပေါ် မူတည်၍ (ဥပမာ၊ တိုင်းတာခြင်းသည်တူညီသည်မဟုတ်) အလွန်မြင့်မားသော voltage များပါသော DC circuit)) 220V ခန့်ရှိသောအိမ်၏လျှပ်စစ်လိုင်းနှင့်နိမ့်သည်။ ) ၎င်းသည်အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီဆိုလျှင်၊ ဖြစ်နိုင်သည့်သို့မဟုတ်ဗို့အားခြားနားချက်ကိုတိုင်းတာလိုသည့် terminal နှစ်ခုသို့မဟုတ်အချက်နှစ်ခုကိုရွေးချယ်ပါ။ ၎င်းကိုဖန်သားပြင်ပေါ်တွင်ပြလိမ့်မည်။ မြေ / မြေအတွက်အနက်ရောင်ဝါယာကြိုးကိုအသုံးပြုရန်သတိရပါ။
ခံနိုင်ရည်ရှိသည်: နောက်တဖန်သင် selector တွင် resistors များအတွက်ယူနစ်နှင့်သင့်လျော်သောအတိုင်းအတာကိုရွေးချယ်ပြီး၊ resistors အတွက် wire ကို red wire ချိတ်ဆက်ပြီး (Ω) ။ ယခုသင်ကခုခံမှုကိုတိုင်းတာရန်လိုသည့်အချက်များအကြားရှိစုံစမ်းမှုနှစ်ခုလုံး၏ထိတွေ့မှုနှစ်ခုလုံးကိုထိတွေ့ရန်ကိစ္စဖြစ်လိမ့်မည်။ ဥပမာခုခံ၏ဆိပ်ကမ်းနှစ်ခုနှင့်တန်ဖိုးသည်မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်ပေါ်လာလိမ့်မည်။
ပြင်းထန်မှု: လက်ရှိအတွက်နည်းနည်းပိုရှုပ်ထွေးတယ်၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သင်ကစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများ၏အစွန်အဖျားကိုစီးရီးအဖြစ်ချထားရမယ်။ ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်သင့်လျော်တဲ့ပမာဏကိုရွေးချယ်ပြီးအနီရောင်ဝါယာကြိုး pin ကိုအေမှာထားပါလိမ့်မယ်။
အချို့သော multimeter များတွင်အလားတူလုပ်ဆောင်မှုမျိုးထက်လုပ်ဆောင်ချက်များစွာရှိသည်။ ထို့အပြင်ခလုတ်များ၊ မှတ်ဉာဏ်စသည်ဖြင့်ခလုတ်များ၊ ပိတ်ထားမှုများရှိသည်။ သင် ... နိုင်ပါသည် လက်စွဲစာအုပ်ကိုဖတ်ပါ သတင်းအချက်အလက်ပိုမိုရရှိရန်နှင့်လုံခြုံရေးအစီအမံများကိုလေးစားရန်သင့်မော်ဒယ်လ်၏။ မကောင်းသောတိုင်းတာမှုသည် multimeter ကိုနောက်ကြောင်းပြန်မလှည့်စေနိုင် ...
သင်စဉ်းစားမိပါလျှင် multimeter ကိုဘယ်လိုရွေးရမလဲအောက်ပါအကျိုးကျေးဇူးများကိုစိတ်စွဲမှတ်ထားသင့်သည်။
resolution နှင့်ဂဏန်းဖြေ - ပထမ ဦး ဆုံးအနေနဲ့၊ သင့်ရဲ့အကြိုရွေးချယ်မှုအရ၊ analog သို့မဟုတ် digital အကြားရွေးချယ်ဖို့ဖြစ်တယ်၊ ငါကိုယ်တိုင်ဒီဂျစ်တယ်ကိုအကြံပြုလိမ့်မယ်။ ရှင်းလင်းပြတ်သားပြီးတဲ့အခါမှာသူကတိုင်းတာနိုင်တဲ့အသေးဆုံးပြောင်းလဲမှုကိုဆုံးဖြတ်ပေးတဲ့ resolution ဒေတာကိုကြည့်ရလိမ့်မယ်။ ပိုကောင်းလေလေ၊ ထိခိုက်လွယ်လေလေဖြစ်တယ်။
ဟုတ်မှန်ရေး- သင်၏တိုင်းတာကိရိယာများ၏တိကျမှုသည်လည်းအရေးကြီးသည်။ ပိုဆိုးတာကသင်ကပရော်ဖက်ရှင်နယ်အသုံးပြုမှုအတွက်ဒါမှမဟုတ်သေးငယ်တဲ့အပြောင်းအလဲတွေကြီးမားတဲ့ပြောင်းလဲမှုစေနိုင်သည်ရှိရာ applications များအဘို့အလိုလျှင်။ ဤသည်များသောအားဖြင့်% ဖြင့်တိုင်းတာသည်။ နံပါတ်ကနည်းလေလေကောင်းလေပဲ။ ဥပမာ၊ ± 0.05% +3LSD, ဆိုလိုသည်မှာ၎င်းတွင်တိကျမှုရှိသည်၊ ဆိုလိုသည်မှာ LSD သည် circuit များ၏ထုတ်လုပ်သောအမှား (ဆူညံမှု၊ ADC converter ၏သည်းခံမှု၊ ) ပြသောတိကျမှုအနည်းဆုံးဖြစ်သည်။ ဤကိစ္စတွင် အကယ်၍ သင်သည် voltage 12 VDC signal များ၏ voltage များကိုတိုင်းတာလိုပါက multimeter သည် 11,994 နှင့် 12,006V အကြားတန်ဖိုးကိုတိုင်းတာလိမ့်မည်။ LSD of3နှင့်အတူနောက်ဆုံးရလဒ်သည်ဖော်ပြလိမ့်မည်။ 11,001 နှင့် 12,009 V. အကြားဖြစ်လိမ့်မည်
RMSs (TrueRMS)၎င်းသည်စျေးပေါသောမီမီတာနှင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်တစ်ခုအကြားတွင်အကြီးမားဆုံးကွာခြားချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် AC တိုင်းတာမှုကိုရည်ညွှန်းသည်။ စျေးပေါသောတူရိယာများသည် waveform များသည်ပြီးပြည့်စုံသော sinusoidal ဖြစ်လိမ့်မည်ဟုယူဆသောအခါ၊ လက်တွေ့တွင်အရာမဟုတ်ပါ။ TrueRMS ၏ဖြစ်ရပ်တွင်ပိုမိုလက်တွေ့ကျသောတိုင်းတာမှုကိုပြလိမ့်မည်။
input impedance- ဒါကအကောင်းနဲ့အကောင်းကိုအကြီးနဲ့ကွဲပြားအောင်ခွဲခြားထားတယ်။ သွင်းအားစုတွင် impedance ပိုမိုမြင့်မားလာသောအခါတိုင်းတာသည့်အခါ၎င်းသည်တန်ဖိုးများ၏တိုင်းတာမှုကိုအနည်းဆုံးဖြစ်နိုင်သည်။ မကောင်းတဲ့ယောက်ျားတွေများသောအားဖြင့်ရှိသည် 1MΩ, ကောင်းမွန်သောသူများမှာ10MΩသို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုနိုင်သည်။
လုပ်ငန်းဆောင်တာသင်ပုံမှန်တိုင်းတာရန်လိုအပ်သည့်အတိုင်းအတာများပါ ၀ င်သည့်မီတာမီတာကိုသင်ရယူရန်အရေးကြီးသည်။ အချို့မှာအခြားသူများတွင်မပါ ၀ င်သောအပိုဆောင်းလက္ခဏာများရှိသည်။ ဒါကြောင့်မင်းရဲ့ပုံမှန်အလုပ်ဒါမှမဟုတ်ဝါသနာမှာဘာတွေလိုအပ်တယ်ဆိုတာကိုဆုံးဖြတ်ပြီးအဲ့ဒီအတိုင်းအတာအားလုံးရှိတဲ့တစ်ခုရွေးပါ။
Fluke ၁၁၅- ပရော်ဖက်ရှင်နယ် TrueRMS ဒီဂျစ်တယ် multimeter နှင့်အလင်းရောင်မြင့်မားသောအခြေအနေများတွင်ပင်အလုပ်လုပ်ရန်အဖြူရောင် LCD display တပ်ဆင်ထားသည်။
Uni-Ball ကို T က UT71ဒစ်ဂျစ်တယ် LCD မျက်နှာပြင်ပါ ၀ င်သောစျေးကွက်တွင်အကောင်းဆုံးပရော်ဖက်ရှင်နယ်မီတာမီတာတစ်ခုဖြစ်သည်။ တိကျမှန်ကန်မှုနှင့်မြင့်မားသော။
Extech EX355: TrueRMS ဖြင့် multimeter၊ DC နှင့် AC အတွက်တိကျမှန်ကန်သောတိုင်းတာမှုများ၊ Phantom voltages များမှမှားယွင်းစွာဖတ်ရှုခြင်းကိုရှောင်ရှားရန် LoZ၊ တိကျသောပြောင်းလဲနိုင်သောကြိမ်နှုန်းအချက်ပြတိုင်းတာမှုအတွက် FPB နိမ့် pass filter များ၊ LED ညွှန်ပြချက်နှင့်မထိတွေ့သော AC voltage detector ။
Kaiweets HT118A: TrueRMS၊ မြင့်မားသောတိကျမှု၊ များပြားလှသောလုပ်ဆောင်ချက်များ၊ အလွယ်တကူအလျင်အမြန်တိုင်းတာနိုင်ရန်အလို့ငှာပြောင်းလဲခြင်းတွင် NCV အဆက်အသွယ်မရှိသောဗို့အားရှာဖွေစက်၊ လုံခြုံစိတ်ချရမှုနှင့်ကြာရှည်ခံမှုအတွက်ကာကွယ်မှုများရှိသည်။
ကူမန်။ multimeter ကစျေးပေါပေမဲ့အဲဒါကအလုပ်ပဲ။ TrueRMS ဖြင့်လုပ်ဆောင်ချက်များစွာရှိသည်။
ကုန်ပစ္စည်းမရှိပါ။တိုင်းတာခြင်းမျိုးစုံအတွက်နောက်ထပ်စျေးသိပ်မကြီးတဲ့၊ ဒီဂျစ်တယ်မျက်နှာပြင်စစ်ဆေးသူ။ အစပြုသူနှင့်အပျော်တမ်းများအတွက်အကောင်းဆုံး။ NCV နှင့် function ကိုသော့ချက်နှင့်အတူ။
AoKoZoဖြေ - ဈေးအသက်သာဆုံး၊ NVC, TrueRMS နှင့်ဒီဂျစ်တယ် multimeter မှသင်မျှော်လင့်ထားသည့်အင်္ဂါရပ်များအားလုံးနှင့်အတူ။
ရှန်ကဖြေ - အကယ်လို့သင်ဟာလွမ်းဆွတ်မှုတစ်ခုမှ Analog တစ်ခုလိုချင်တယ်ဆိုရင်ဒီပစ္စည်းအမျိုးအစားကိုပိုနှစ်သက်ချင်တယ်ဆိုရင်၊ ဒီပရော်ဖက်ရှင်နယ်မြင့်မားသောတိကျသောစမ်းသပ်သူရွေးချယ်စရာရှိသည်။
နီကို: ယခင်တ ဦး တည်းမှအခြား Analog စအခြားရွေးချယ်စရာ။ စျေးသိပ်မကြီးပေမယ့်သင်ရိုးရှင်းတဲ့အရာတစ်ခုခုကိုရှာဖွေနေမယ်ဆိုရင်အလုပ်ဖြစ်ပါတယ်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - အခမဲ့ဟာ့ဒ်ဝဲ » အီလက်ထရောနစ်အစိတ်အပိုင်းများ » multimeter ကိုဘယ်လိုရွေးရမလဲ - သင်သိရန်လိုအပ်သောအချက်များ
ထုတ်လုပ်သူများအတွက်အကောင်းဆုံး 3D ပုံနှိပ်ဆော့ဝဲ